Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Rosia » Rosiana (ovay)
Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Rosia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Sagid Zaremukov dia miatrika ny asa amin'ny fampivelarana bebe kokoa ny asan'ny fikambanana sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny indostria, hampiroborobo ny hetsika mety hitranga amin'ny firenena sy ny faritra misy azy, mamolavola ny fandaharam-potoana iraisam-pirenena an'ny RCB, ary koa ny fametrahana tetikasa hamoronana tambajotram-paritra biraon'ny kongresy.
Nahazo fanohanana 100% ny filatsahan'i Sagid Zaremukov.
Ny lohan'ny vaovao an'ny RCB manana traikefa 15 taona mahery amin'ny orinasa lehibe eo amin'ny sehatry ny hetsika.
Izy dia manam-pahaizana voamarina amin'ny mari-pahaizana kalitaon'ny Governemanta Federasiona Rosiana.
Ny fifidianana ny talen'ny Fikambanana vaovao dia natao tao anatin'ny rafitry ny Fihaonamben'ny Fiangonana Birao Fifanarahana Rosiana (RCB) orinasa mpikambana, izay natao tamin'ny 9 Jolay 2021 tao amin'ny tranon'ny Cosmonautics and Aviation Center (VDNKh, pavilion 34). Raha ny valim-pifidianana dia nahazo fanohanana 100% ny filatsahan'i Sagid Zaremukov.
Ny lohan'ny vaovao an'ny RCB manana traikefa mihoatra ny 15 taona amin'ny orinasa lehibe eo amin'ny sehatry ny hetsika. Talohan'ny nidirany tao amin'ny Birao Fifanarahana Rosiana dia nitana andraikitra ambony tao amin'ny Vondron'orinasa RESTEC izy, iray amin'ireo fikambanana lehibe eo amin'ny tsenan'ny fivoriambe sy ny fampirantiana Rosiana. Tamin'ny taona 2018, Sagid Zaremukov dia nanatevin-daharana ny ekipan'ny Birao Fifanarahana Rosiana ary niara-niasa tamin'ny tompon'andraikitra mpanatanteraka federaly sy isam-paritra, ary koa fikambanana sy orinasa eo amin'ny sehatry ny hetsika eto amin'ny firenena, dia nisolo tena ny tombontsoan'ny mpikambana RCB ao amin'ny fikambanan'ny governemanta sy ny fikambanam-panjakana amin'ny ankapobeny. fampandrosoana ny indostria. Nanomboka ny volana martsa 2021 dia izy no talen'ny RCB. Izy dia manam-pahaizana voamarina amin'ny mari-pankasitrahana kalitaon'ny Governemanta Federasiona Rosiana.
Tao amin'ny fanehoan-keviny, Sagid Zaremukov dia nanamarika fa ny tetika mahomby amin'ny fifandraisana amin'ireo mpilalao indostrialy manan-danja noforonina nandritra ny taona maro niasan'ny Fikambanana, ny fiaraha-miasa stratejika amin'ireo birao isam-paritra, ny indostria mitarika ary ireo fikambanam-bahoaka dia hitohy. "Hikaroka endrika vaovao amin'ny fiaraha-miasa iraisana koa izahay mikendry ny fampandrosoana ny tsenan'ny hetsika Rosiana sy ny fanamafisana ny indostria," hoy i Sagid Zaremukov.
Tao anatin'ny rafitry ny Fihaonambe Jeneralin'ny RCB, olana ara-pandaminana maromaro mifandraika amin'ny asan'ny Fikambanana no nodinihina ary nambara ny valin'ny tetikasa fanabeazana an-tserasera an'ny RCB "Summer Academy". Ny tetikasa dia nampiharina niaraka tamin'ny R&C Exhibition and Research Center ary miaraka amin'ny fanohanan'ny Roscongress Foundation. Ny tanjony dia ny hanomezana ireo mpandray anjara amin'ny tsenan'ny kaongresy sy ny fampirantiana fotoana iray ahafahana mivelatra matihanina manokana na hahazo fahaizana vaovao. Tamin'ity taona ity, 18 ireo manam-pahaizana momba ny kaongresy sy ny indostrian'ny fampirantiana ary ny indostria mifandraika amin'izany no lasa mpampianatra ao amin'ny RCB Summer Academy ary nizara ny zavatra niainany tamin'ny mpanatrika. Maherin'ny 200 ny solontenan'ny kongresy sy ny tsenan'ny fampirantiana tonga mpihaino ny tetikasa "RCB Summer Academy". Tao amin'ny tranokala VDNKh, nomena mari-pahaizana ireo nahazo diplaoma ary fisaorana an'ireo mpampianatra ho an'ny RCB Summer Academy.
JSC VDNKh, NEGUS-Expo ary ny orinasan-tsakafo Prazdnik Vkusa dia mpiara-miombon'antoka amin'ny Fihaonamben'ny Birao Fivoriambe Rosiana. Fitsidihana ny Cosmonautics and Aviation Center no natao ho an'ireo mpandray anjara tamin'ny Fihaonambe, ary nandritra ny fizahana ny tranokala dia naseho ny fahaizan'ny kongresy sy ny fampirantiana ireo tranokala VDNKh.